Swedishka oo ka tuugsada wadamada ay dalxiiska u tagaan | Somaliska
Warbixin uu qoray wargeyska The Herald Sun oo ka soo baxa magaalada Melbourne oo dalka Australia ayaa sheegay in ay wadooyinka magaaladaas ku soo badanayaan dalxiisayaal u badan Swedish oo tuugsanaya. Wargeyska ayaa qoray in dadkaan tuugsanaya ee ka yimid wamada kale ay u badanyihiin ragg dhalinyaro ah oo da’dooda ka yartahay 30 sano jir. Inta badan dadkaan ayaa la sheegay in ay ka soo jeedaan wadamada Sweden iyo Germany.
Hay’ada lagu magacaabo Salvation Army oo ka shaqaysa taageerada dadka tuugsada ayaa ka dayrisay ficilada dadkaan, iyagoo sheegay in ay tartan ku furayaan dadka tuugsada ee dhibaatada dhabta ah ay haysato. Dalxiisayaasha ayaa la sheegay in ay u tuugsadaan si ay isaga bixiyaan qarashka ay ku joogayaan Australia. Gobolka Victoria ee ay ka tirsantahay magaalada Melbourne ayaa ah goob uu tuugsiga sharci daro ka yahay, iyadoo mayorka magaaladaas uu sheegay in dalxiisayaasha tuugsanaya xabsiga la dhigi doono.
Iyadoo ay Swedishku ka tuugsanayaan wadamada kale, ayaa wadanka Sweden waxaa ka taagan dood kulul oo ku saabsan dadka tuugsanaya oo inta badan ka imaanaya wadanka Romania. Qaar ka mid ah shacabka Sweden ayaa ku doodaya in laga mamnuuco in dadkaas ay halkaan ka tuugsadaan.